Chipiri, January 26, 2021
musha nyika dzakabatana Vanachiremba Dr Stella Immanuel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dr Stella Immanuel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Dr Stella Immanuel Biography inoenda yakadzama pamusoro penyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Hupenyu hwekuroora (murume), Vana, Net kukosha, Mararamiro uye Hupenyu hweMunhu. Isu tinokupa iwe wakadzika kudzika kwehupenyu hwake nyaya kutanga kubva paKutanga Mazuva ake kuburikidza mukurumbira wake.
Unogona kunge wakaona mavhidhiyo mashoma eutachiona hwake. Stella Immanuel anozivikanwa nekuda kwake kwekupokana achiti hydroxychloroquine mushonga waizoporesa COVID-19. Zvaanotaura zvinopikisa zvakananga izvo zveWorld Health Organisation (WHO).
Stella Immanuel chiremba (Chiremba Chiremba uye Pediatric Medicine Nyanzvi). Iye zvakare Munyori, Muzvinabhizimusi, Gurukota reDeliverance, uye demo rehondo raMwari sezvaari kuda kuzivikanwa. Unonzwa uri pamba kunyangwe patinenge tichizarura nekukupa iwe neinonakidza nhoroondo yeStella Immanuel.
Stella Emanueri Zvechikoro nyaya:
Kunyangwe isu patinotanga, ngatitore iyi nhoroondo kubva pakutanga chaipo. Chiremba chizere zita ndinonzi Stella Gwandiku-Ambe Immanuel. Mukadzi ari kuberekwa musi wa5 Chivabvu, 1965 anofanira kunge ari Makumi mashanu neshanu (55) makore mu yaimbova nzvimbo yepakati poushe, ikozvino inozivikanwa seBali. Guta riri kumadokero kweBamenda mukati Cameroun, Central Africa.
Achitora hupenyu hwepakutanga hwaChiremba naPastor, akange arangarira kufarira mushonga kubva pazera ramakore mana (4). Amai vaStella Immanuel vakakuita tsika yekupa vana vavo chloroquine prophylaxis inozivikanwa semushonga weSvondo-Svondo. Mushonga uyu waive wekudzivirira kuitika kweMalaria; semhedzisiro yekuve munzvimbo yeMalaria Endemic nzvimbo.
Stella Imanueli akakurira mutsika yehondo yakavhurika ane hushingi, masimba emadhimoni nenhare dzakaomarara zvaizivikanwa. Iye anonzwa kuti munamato wechisimba uye kusangana pachena pamasimba erima kunofanirwa kudzidziswa, kudzidziswa uye kushandiswa nemaKristu. Minamato yaanotenda ichaona kuti ibudirire uye kubudirira mune zvakatarisana muhupenyu hwavo hwese, hushumiro uye mhuri.
Stella Imanueri Yemhuri Yemhuri:
Imba yaChiremba inofanirwa kunge yaive mhuri yepakati nepakati yekuve zviwanikwa zvekutsigira mwanasikana wavo kudzidza zvemishonga. Mushure meizvozvo aizoenda kuUnited States.
Mhuri yaStella Immanuel Kubva:
Sezvakangoita vatema vazhinji kuUS, mukadzi weAfro-American ane madzitateguru anobva Africa. Kunyangwe anga ave muUS, kwemakore makumi matatu (30) manje. Ano kubva Bali, Camerounian neKazvarwa uye mabviro. Cameroun inyika iri panharaunda ye Guinea, Central Africa.
Mepu inoratidza kwakatangira Stella kubva kuBali, Cameroun.
Kufunga kuti Stella Imanueri anobva wedzinza reCameroonia uye chizvarwa chekutanga American. Tinogona kupedzisira taura zvakare kuti ndiCamerounian-American.
Stella Imanueri's Dzidzo:
Tisati tafambira mberi kune basa rekuvaka-yedu yekutarisa hunhu, ngatitarisei kuzvikoro zvaaipinda. Stella akaenda kuCameroon Protestant College, Bali muCameroun. Nguva pfupi yapfuura, mu1984, akaenda kuchikoro kwake chepamusoro kuYunivhesiti yeCalabar (UNICAL).
Muna 1990, akapedza chikoro chekurapa, UNICAL. uye akazotamira kuUnited States muna 1992. Yakanga iri muUS kuti akapedzisa kugara kwake muvana Mushonga paBronx-Lebanon Hospital Center, New York. Kunyangwe chipatara chiri yava kunzi Bronx Care Health System.
Basa raStella Immanuel Kuvaka-up:
Nechido chakanyanya chebasa rekurapa, wechidiki uyu akatanga basa rake kuPwereatric Clinic muLouisiana. Muna 1998, akatanga kudzidzira kuPediatric Clinic yekumaodzanyemba muAlexandria, Louisana. Zvimwe zvakawanda zvinowanikwa mune inotevera musoro.
Stella Immanuel's Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Nekuda kwekutsunga kwake, Mufundisi-chiremba, pasina zororo, akabatana naana chiremba wechiremba wechiremba. Aizouya gare gare mu2006 aine Rapha Medical uye Therapeutic Clinic muLouisana.
Mushure meizvozvo akazove chiremba akanyoreswa muTexas aine rezenisi rinoshanda kubva kuTexas Medical Board. Pakazosvika gore ra2019, Dr Stella vakatanga kushandira Houston's Rehoboth Medical Center. Kunyangwe, iyo Center ndeyake.
Mufananidzo wekare waStella, wakatanga kuonekwa muna2014.
Akavhurawo Fire Power Ministries uye ndiye muparidzi weredhiyo neterevhizheni yakanzi Moto Simba.
Stella Immanuel Biography - Kumuka Mukurumbira:
Mukurumbira wake wakatanga kubhururuka paakabuda nezvikwereti pavhidhiyo yehutachiona kuburikidza vezvenhau. Stella anoti ane mushonga weCorona Virus. Zvirevo zvinotsigira nenyaya yekuti akakwanisa kurapa zvinobudirira mazana matatu nemakumi mashanu (350), varwere veCCIDID-19. Kurapa, sezvaakataura, kwakauya nekubatanidzwa kwe hydroxychloroquine, azithromycin, uye zinc.
Izvo zvakakodzera kuti uzive kuti chero yakanyanya kutsvagisa yesainzi haitsigire chirevo. Kunze kwezvo, hapana chinodhaka chakabvumidzwa senzira chaiyo yekurapa kweCOVID-19. Stella anoti zvakare kupfeka zvechiso kumeso uye kudzvanya pasocial hazvidiwe.
Mushonga weanopariyari, hydroxychloroquine yaimbova nemvumo yekushandiswa kwekukurumidzira kweCOVID-19 yakabviswa neUS Food and Drug Administration, iyo ichiratidzwa kuve inoshanda kurapwa kweiyo coronavirus.
Stella achitaura marapiro aakaita vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu eCOVID-350.
Musi waChikunguru 27, 2020, Imanueri akaoneka mumutambo weTii Patriots-anotsigira chiitiko chevatori venhau na boka rinozivikanwa se "America's Frontline Doctors" pamberi pematanho eDare Repamusorosoro reUS.
Hupenyu Hwemhuri hwaStella Immanuel:
Kunyangwe kunyangwe zvidiki isu tinoziva nezve yekuzvidaidza wega yemhuri axe mhuri. Zvakangodaro, haaigona kunge akaenda kunoenda kunze kwekuchengetwa nerudo uye rutsigiro rwevabereki vake. Stella amai vasina murume vane vana.
Akaratidza kuratidzwa kukuru kwerudo kuvana vake zvekuti mumwe wevana vake akasarudza kutevera nzira imwechete yeMedicine.
Zvizhinji Nezve Stella Imanueri Vana:
Kunyangwe gurukota rekudzikinura risina kuroora, ane vana vatatu (3) vana- mukurumbira pakati pevana vake. Mimi Fondong akapedza kudzidza kuBaylor University uye University of Westminster muLondon.
Fondong akakurira akakomberedzwa nevanhu vane mabasa mune zvehutano. Akafuridzirwa neaya zvekurapa vanhu vanhu vaizokanganisa sarudzo yake yeMedicine kubva pazera diki. Parizvino anogara muHouston.
Mimi Fondong mune rake rekupfeka.
Kwete zvakawanda zvatinoziva nezvevamwe vana vaviri. Kunyangwe imwe pakati pevamwe vaviri (2) anozivikanwa saBernadette, uyo akatanga kuenda kuYunivhesiti yeHouston mu2017. Vana vaStella vakave neropafadzo yekugovana zviitiko zvavo zvakaipa vachikura se vatema muAlexandria, Louisiana.
Hupenyu Hwe Stella Imanueri:
Kune hupenyu hwese mushumiri wechitendero, MuCameroonia akazvarwa Chiremba anofanira kunge akagamuchira maitiro eKunamatira. Kunyangwe izvi zviri padivi penzvimbo yake yebasa sachiremba. Zvido zvake zvinosanganisirawo kuverenga, kunyora uye kutaura pamberi pevanhu.
Stella Immanuel Achiita mabasa ake saMufundisi.
Stella Imanuel Lifestyle:
Kunyangwe isu tichiziva iye akakurumbira Chiremba anogara muHouston, Texas. Mari yaStella, mota kana mhando yeimba hazvizivikanwe. Nekudaro, iye ari pakati peVanachiremba vane mukurumbira uye vakapfuma vane mavambo eAfrica, Dr Stella ane mari inofungidzirwa kuti ingangosvika madhora 1.1 Miriyoni emadhora ekuAmerica.
Chitendero chaStella Immanuel:
Sekureva kwaConcordia University dzidziso yezvouMwari purofesa André Gagné, dzidziso dzeCameroonia -America dzinodzokera kuAfrican Pentecostalism uye nesangano rinokwezva. Haasi muKristu chete, asiwo Mufundisi uye muvambi weFire Power Ministries yeHouston, Texas.
Ona kunyemwerera kwachiremba asina kudzora pakutenda kwake.
Chechi inozvibatanidza mukudzikinura, Kunamata uye nehondo yemweya. Anotenda kushevedzwa kwake semuprofitakadzi kudzidzisa mauto akakuvara aMwari evatendi zvehondo zvechisimba- chirevo chake “uyo ane chisimba anochitora nechisimba”!
Stella Immanuel's Untold Chokwadi:
Kunyangwe isu patinotenderedza yedu yehucheche nyaya uye Biography chinyorwa. Mufaro wedu
zvakare kuendesa yakatarwa ruzivo iwe yaungangodaro waisaziva maererano neCameroonia- chiremba wechiAmerican. Pasina kumwe kunonoka, ngatitorei bhora kutenderera.
Chokwadi - # 1: America Yepamberi Vanachiremba
Iri iboka revashandi vekurapa, vachitsoropodza kubvumirana kwesainzi kwakatenderedza denda reCovid-19. Stella Immanuel zvakare ari chikamu chevemberi veDoctor veAmerica. Ava varapi vane kutenda kwekuti kana kudzima kana masiki zvakakosha pakurwisa kupararira kwe COVID-19.
Dr Stella anokwanisa uye akatenderwa Chiremba.
Muvambi weboka, Simone Ndarama, mutsamba yakanyorerwa Mutungamiri Trump inodaidzira kupera kwemaitiro ekuvharira imwe nguva muna Chivabvu 2020. Kusvikira pane izvi, kubvunzurudzwa kuzhinji nevanokurudzira vezvenhau vakaita senzira iri nani yekusvika kumaAmerican.
Iyo gakava rave kuwedzera kupatsanura maAmerican pamwe nezvematongerwo enyika, nevatsigiri vehydroxychloroquine vachinongedzera Mutungamiri Trump kutsigira kwaro uku uchipomera vatsoropodzi kuti vanovhara kugona kwayo kugona.
Chokwadi - # 2: Mharidzo pavaroyi nevaroyi
Mufundisi weDeliverance, akapomera kushandiswa kweiyo mutorwa DNA mukurapa, zvakare kuti vesaenzi vaishanda mushonga wekudzivirira vanhu kuti vasanamate zvakanyanya. Zvimwe zvirevo zvinosanganisira kupomera varapi uye madhimoni mhosva - chitendero chakajairika pakati pevamwe maEvangelist - kunyangwe achiti vanoita zvepabonde nevanhu munyika yekurota.
Imwe nyaya yakanangwa naDr Immanuel kuroora ngochani, achiti zvinogona kukonzera kuti vanhu vakuru varoore vana. Anoyambira zvakare ungano yake pamusoro pengochani.
Chokwadi - # 3: Nyowani Anodiwa naDonald Trump
Mutungamiri Trump anotsigira zvizere zvataurwa naStella nezve Covid-19 uye hydroxychloroquine. Kuti izvi zviitike, mugari wemuAmerica anoverenga mameseji neChipiri mangwanani achitsoropodza Dr Anthony Fauci, kusanganisira imwe yaimuti "kubiridzira" uye imwe yaiti "atsausa vanhu pane zvakawanda." Fauci, inoitika kuve kumeso kweAmerica kurwisa coronavirus.
Chokwadi - # 4: Stella Immanuel Mabhuku
Chiremba anopokana akanyora mabhuku akati wandei sesimba rake rekushandisa akateedzana. Mashanu (5) emabhuku ake ari paAmazon. Zvimwe zvacho zvinosanganisira; Iyo Zvirevo 31 Munhu uye Makiyi Ekubudirira Hondo Yemweya.
Mufananidzo wekuvhara kune rimwe remabhuku aStella.
Chokwadi - # 5: Inowedzera Nhamba yevaFans
Chiremba veteran kubvira kukakavara pahydroxychloroquine yakawona kukura kukuru muvateveri.
Munguva pfupi yapfuura, Madonna, akapora kubva kuCovid-19, akasimudzira Dr Stella Immanuel hydroxychloroquine vhidhiyo pa Instagram. Anodaidza Dr Immanuel, "gamba." Kunyangwe Mufundisi weNigerian, David Oyedepo Snr. inoratidza kutsigira kwake Stella nezvake.
Iye ane yeYouTube chiteshi ine vanopfuura makumi maviri nemapfumbamwe zviuru (29,000) vanyoreri. Uye zvakare inokura nekukurumidza nhamba yevateveri paTwitter zvakare nevane zana nemakumi manomwe nepfumbamwe zviuru (179k) vateveri.
Dr Stella Immanuel Biography Dhata
Zita rizere: Stella Gwandiku-Ambe Imanueri
Zita rekudanwa: Stella Imanueri
Mamwe Mazita: Stella Gwandiku-Tita, Stella Gwandiku, Stella Gwandiku Fondong, Stella Grace
Zuva rekuzvarwa: 5th yaMay, 1965
Nzvimbo yekuzvarirwa: Bali, Cameroon, Central Africa
Vana: Mimi Fondong naBernadette
Dzidzo: Yunivhesiti yeCalabar, Nigeria (MD)
Basa: Chiremba, Munyori uye Mufundisi
Hobbies: Kunamata, Kuverenga uye Kutaura Veruzhinji
Net Worth: $ 1.1 miriyoni USD
Nationality: Cameroonia -America
Kugara Kwazvino: Houston, Texas, US
Isu tinofungidzira kuti wakakuwana kuchinakidza, uchiverenga yedu Stella Imanueri nyaya yehucheche. Isu takawona maDoctor, kunze kwekuda uye hanya nehupenyu hwevanhu vakatsvaga nenzira dzese kuti vataure. Kunyangwe maitiro eiyo WHO neAmerica CDC. Ndiani anoziva hupenyu hwakawanda hwakarasika nekuda kwe COVID-19, anogona kunge akaponeswa.
Haven akataura zvese izvozvo; zvinofadza kuti iwe unoita zvakanaka kugovana ruzivo rwako nesu. Kunyangwe isu tichiramba tichiunza iwe hwakawanda hwenyaya rechokwadi neepamusoro-notch
kururama uye kururamisira; mvura, huya upenye. Ramba wakabatana mafeni!
Dr Ben Carson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Dr Anthony Fauci Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 11, 2020